Somali News 05.27.21 | KWIT
Somali News 05.27.21
By Person: Halima Osman • May 27, 2021
Maamulaha magaalada ee magaalada Sioux City ayaa ku booriyay xubnaha golaha in ay ku bixiyaan inta badan lacagta gargaarka ee dowladda dhexe ee COVID-19 kaabayaasha dhaqaalaha, oo ay ku jiraan mashaariicda biyaha iyo bulaacadaha.
Wadarta guud waxay ka badan tahay $ 43 milyan.
Goluhu wuxuu rabaa inuu u qoondeeyo in ka badan shan milyan oo loogu talo galay macaash doonka, dalxiiska iyo isgaarsiinta. Magaalada waxay heysataa ilaa dhamaadka 2024 inay qoondeyso lacagta iyo labo sano oo kale inay kubixiso.
Badhasaabka Nebraska Pete Ricketts ayaa ka codsanaya sharci dajiyayaasha inay adkeeyaan diidmadiisa qayaxan ee u ogolaanaya dadka deegaanka in ay uruuriyaan dheefaha kaalmada cuntada, isagoo ku doodaya inay taasi gaabinayso ka soo kabashada gobolka ee aafada.
Gudoomiyaha jamhuuriga ayaa warqadiisa diidmada qayaxan ku sheegay in talaabadani ay abuureyso kala furfurasho dadka qaata si ay u raadsadaan shaqooyin mushahar fiican qaata xili ganacsiyo badan baahi weyn u qabaan shaqaalaha.
Diidmada diidmada qayaxan ayaa dhaleeceyn deg deg ah kala kulantay dadka u dooda dadka saboolka ah, kuwaas oo ku doodaya in qaatayaal badan ay yihiin qoysas shaqeeya oo leh caruur wali la daalaa dhacaya cudurka.
Si loo caawiyo dadka ku gaajaysan aaggeenna, lacag bixin kale oo wadista baabuurta ah ayaa loo qorsheeyay berri magaalada Sioux City. Qaybinta waxay dhacdaa 10-ka subaxnimo ee Sunnybrook Church. In ka badan 1,100 sanduuq ayaa lagu wareejin doonaa iyada oo loo marayo barnaamijka "Beeraleyda Qoysaska" ee USDA oo loo qaybiyey caawimaad ay ka heleen Hay'adda Waxqabadka Bulshada iyo Xarunta 'Sunnybrook Hope Center'. Waxaa jiray baahi xoog leh oo loogu talagalay dhacdo la mid ah oo la qabtay toddobaad ka hor.